Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.7 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး / သတင်းအချက်အလက်စက္ကူ>
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE">
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.7 + bee!
Aprilပြီလ 2021,7ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူသည်“ ART bee HIVE” ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းမှအသစ်ထုတ်ဝေသောဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
"BEE HIVE" ဆိုသည်မှာပျားအုံဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းသောလူသစ်စုဆောင်းမှုဖြင့်စုဆောင်းထားသောရပ်ကွက်သတင်းထောက် "Mitsubachi Corps" နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အနုပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးလူတိုင်းထံပေးပို့လိမ့်မည်။
"+ bee!" တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက္ကူပေါ်တွင်မိတ်ဆက်မပေးနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပါမည်။
ဆောင်းပါး၏ဆောင်းပါး Hasui ( မြန် ) ＋ ပျားရေးဆွဲသော Daejeon ၏ရှုခင်း။
"Ota ရပ်ကွက်ရိုးရာပြတိုက်မှူး Masaka ( ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင် ) အော်ရီ "
Ota Ward ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကသာယာလှပသောနေရာတစ်ခုအဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအဲဒိုကာလအတွင်း၎င်းသည် ukiyo-e အဖြစ် Hiroshige Utagawa, Hokusai Katsushika နှင့် Kuniyoshi Utagawa ကဲ့သို့သောပန်းချီဆရာများစွာကဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။အချိန်ကုန်လွန်သွားပြီး Taisho ခေတ်တွင် "ပုံနှိပ်အသစ်" ဟုခေါ်သောသစ်သားနံရံသစ်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ခေါင်းဆောင်နှင့်အကျော်ကြားဆုံးစာရေးဆရာမှာ Hasui Kawase (1883-1957) ။ ၎င်းကို "Showa Hiroshige" ဟုခေါ်ပြီးပင်လယ်ရပ်ခြားရေပန်းစားသည်။လက်ရှိအိုင်တီလူ့ဘောင်ကိုမွေးဖွားခဲ့သောစတိဗ်ဂျော့ဘ်သည်လည်းအားတက်ကြွသောစုဆောင်းသူလည်းဖြစ်သည်။
ပေး: Ota Ward ရိုးရာပြတိုက်
Ukiyo-e နှင့် Shin-hanga တို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
"အရောင်အဆင်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအသစ်များသည်အသစ်ဖြစ်သည်။ အဲဒိုခေတ်ရှိ Ukiyo-e ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည်အနည်းငယ်ပုံပျက်နေသော်လည်း Hasui ၏ပုံနှိပ်ခြင်းအသစ်သည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ ထို့အပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းအရောင်များလည်းကွဲပြားသည်။ ukiyo-e" ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များတွင်အရောင်ပေါင်း ၂၀ နှင့်အသစ်ကပုံနှိပ်ရာတွင် ၃၀ မှ ၅၀ အထိရှိသည်။ "
Hasui ကို "ခရီးသွားပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်သူ" နှင့် "ခရီးသွားကဗျာဆရာ" ဟုခေါ်သည်။
“ ငါဘာကိုနှစ်သက်သလဲလို့မေးတဲ့အခါငါချက်ချင်းခရီးသွားမှာပါ!” ငါ၏အလုပ်၏မှတ်ချက်တွင်။သင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအမှန်တကယ်ခရီးသွားသည်။ငါပုံကြမ်းခရီး၌သွား။ ပြန်လာ။ , ချက်ချင်းပုံကြမ်းဆွဲငင်ပြန်ခရီးစဉ်အပေါ်သွားလေ၏။Great Kanto မြေငလျင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Shinshu နှင့် Hokuriku မှ Kansai နှင့် Chugoku ဒေသများသို့ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခရီးသွားမည်။ ငါအိမ်ကနေသုံးလကြာအောင်နေခဲ့ပြီးတစ်ချိန်လုံးခရီးသွားနေခဲ့တယ်။"
"Hasui Shimbashi ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်၏မွေးရပ်ဇာတိမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကတည်းကတိုကျိုပန်းချီကားများစွာရှိသည်။ ငါမှတ် 100 ကျော်ကျော်ဆွဲပါပြီ။ကျိုတိုနှင့်ရှီဇူokaစီရင်စုများသည်ကျေးလက်ဒေသများတွင်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အမှတ် ၂၀ မှ ၃၀ အထိရှိသည်။တိုကျိုသည်အလွန်ကြီးမားသည်။ ၅ ကြိမ်ဆွဲမယ်"
"၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မွေးဖွားကြီးပြင်းသောမြို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျော်ကြားသောနေရာများ၏သမိုင်းဝင်နေရာများကိုသာမက Hasui ကိုယ်တိုင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောတိုကျို၏ရှုခင်းများကိုပုံဖော်သည့်အရာများစွာရှိသည်။ဘဝရှိမြင်ကွင်းတစ်ခု၊ အထူးသဖြင့် Taisho ခေတ်ကရေးဆွဲခဲ့သောပန်းချီကားများသည်ရုတ်တရက်သတိပြုမိခဲ့သူများ၏နေ့စဉ်ဘဝကိုဖော်ပြသည်။"
"ထုံးစံအတိုင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းအသစ် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိရှိသည်၊ အများဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ကုန် ၃၀၀ တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Hasui ၏ "Magome no Tsuki" ကိုထိုထက်ပိုသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။နံပါတ်အတိအကျကိုကျွန်တော်မသိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာရောင်းလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်ပုံရသည်။
ထို့အပြင် ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာအထိနိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဗျူရိုသည်နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ဂျပန်သို့ခရီးထွက်ရန်ဖိတ်ကြားရန်ပိုစတာများနှင့်ပြက္ခဒိန်များပေါ်တွင် Basui ၏ရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုခရစ်စမတ်ကတ်အဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှသမ္မတများနှင့် ၀ န်ကြီးချုပ်များသို့ဖြန့်ဝေရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်ပတ်သွားမှာပါ။ဤသည်ပြည်ပမှာ Hasui ရဲ့လူကြိုက်များမျှော်လင့်၌တည်ရှိ၏။"
Hasui Kawase "Magome no Tsuki" "Tokyo of Twenty Views" Showa 5
Ota Ward ရှိပန်းချီလုပ်ငန်းအများစုကိုအသုံးပြုပါ
ကျေးဇူးပြုပြီး Ota Ward နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောပြပါ။
"Ota," Senzokuike "," Ikegami Ichinokura (Sunset) "," Magome no Tsuki "," Omori Kaigan "," Yaguchi "စသည်ဖြင့်ရပ်ကွက်၏ရှုခင်းရှုခင်းငါးခုကိုရေးဆွဲထားသည်။ "Senzoku ရေကန်" ကို ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။Hasui သည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်အကုန်တွင် Ota Ward သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။အစပိုင်းမှာတော့ငါ Omori Daisan အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းနားမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ မှာ Magome ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်၏ပန်းချီကားအများစုကို Ota Ward တွင်သုံးပါသည်။"
Yaguchi ၏ Pass Mark အနီးတွင်နေထိုင်သူများအပန်းဖြေနိုင်သည့်မြစ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ⓒကဇနီကီ
Ota Ward ကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လက်ရာအချို့ကိုသင်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မလား။ဥပမာအားဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်မှု၏အချိန်နှင့်ယခုရှုခင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၏ပျော်စရာအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
"Ota Ward ကိုသရုပ်ဖော်သည့်အလုပ်တစ်ခုအနေဖြင့်" Darkening Furukawa Tsutsumi "(1919 / Taisho 8) ရှိသည်။Nishirokugo ရှိ ginkgo သစ်ပင်သည်နာမည်ကြီး Furukawa Yakushi ဟုပြောသော Anyo-ji ဘုရားကျောင်းအနီးရှိ Tama မြစ်တစ်လျှောက်areaရိယာကိုသရုပ်ဖော်သည်။ဘာမျှမနှင့်အတူအစိမ်းရောင်တာတမံဆွဲနေသည်, သို့သော်ယခုလူနေအိမ်areaရိယာဖြစ်ပါတယ်။
"မိုးအုံ့နေ့၌ Yaguchi" (၁၉၁၉ / Taisho 1919) သည် Tama မြစ်၏ရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျော်ကြားလှတဲ့ Yaguchi Pass ကိုဆွဲမယ့်အစားငါဟာတိုကျိုနဲ့ယိုကိုဟားမားကိုကျောက်စရစ်ခဲတွေသယ်ဆောင်နေတဲ့ရေတိမ်ပိုင်းနဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ကျောက်စရစ်ခဲကိုဆွဲနေပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သောအမျိုးသားများ၏ဓါတ်ပုံများကိုဆွဲရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်ကျောက်စရစ်များယဉ်ကျေးမှုအပါအ ၀ င်ယခုကြည့်ရှုရန်အရိပ်မရှိပါ။Hasui ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ကကျော်ကြားတဲ့နေရာကိုမဆွဲဆောင်ဘူးလား။သူတို့နှစ် ဦး လုံးသည် Taisho ခေတ် ၈ နှစ်မြောက်လက်ရာများဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Ota Ward တွင်မနေထိုင်သေးသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"Senzoku Pond" နှင့် "Tokyo Twenty Views" (1928 / Showa 3) တို့သည်ယခင်ရှုခင်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် Senzokuike ၏တောင်ဘက်ရှိလက်ရှိ Boathouse မှ Myofukuji ဘုရားကျောင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။Washoku ရှုခင်းများအသင်းသည်ထိုအချိန်ကသဘာဝ၊ ရှုခင်းနှင့်အရသာတို့ကိုကာကွယ်ပေးဆဲဖြစ်သည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အိမ်ရာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်တည်ဆောက်လာချိန်၌ဖြစ်သည်။
Hasui Kawase "Senzoku Pond" "Tokyo of Twenty Views" ကို ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
"Magome no Tsuki" နှင့် "Tokyo Twenty Views" (1930 / Showa 5) သည် Ise ထင်းရှူးပင်များကိုသရုပ်ဖော်သည့်လက်ရာများဖြစ်သည်။ကံမကောင်းစွာထင်းရှူးပင်သေပြီ။အဲဒိုကာလအတွင်း sese သို့သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့်ရွာသားများသည်ထင်းရှူးပင်များကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာသည်။၎င်းသည် Magome ၏သင်္ကေတဖြစ်ပုံရသည်။Matsuzuka (၃) ခုသည် Tenso ဘုန်းကြီးကျောင်း၏အဓိကနတ်ကွန်းနောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည်။
Shin-Magomebashi မှ Sanbonmatsu ရှိခဲ့သော Tenso ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကြည့်ပါ။ Ⓒကဇနီကီ
"Omori Kaigan" နှင့် "Tokyo Twenty Views" (1930 / Showa 5) ကိုယခုပြန်လည်ပြုပြင်နေပြီ။Miyakohori ဥယျာဉ်ပတ်လည်မှာရှိတယ်။ဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုရှိပြီးဆိပ်ခံတံတားတစ်စင်းရှိတယ်။အဲဒီကနေပင်လယ်ရေညှိခြံကိုကျွန်တော်စခဲ့တယ်။အိုမိုရီပင်လယ်ရေညှိသည်ကျော်ကြားပြီး Basui သည်မကြာခဏအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။
Hasui Kawase "Omori Kaigan" "Tokyo of Twenty Views" Showa 5
"Sunset of Morigasaki" ရှိ Morigasaki (1932 / Showa 7) သည်ပင်လယ်ရေမှော်စိုက်ပျိုးသည့်wasရိယာလည်းဖြစ်သည်။၎င်းသည် Omori Minami၊ Haneda နှင့် Omori ကြားတွင်ရှိသည်။တွင်းထွက်စမ်းပေါက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အရင်တုန်းက Magome စာရေးဆရာဟာကစားဖို့သွားခဲ့ဖူးတယ်။သရုပ်ဖော်ထားသောတဲသည်ပင်လယ်ရေမှော်ခန်းခြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ "
ဇူလိုင်လမှ Ota Ward ရိုးရာပြတိုက်၌ကျင်းပခဲ့သည်အထူးပြပွဲ "Hasui Kawase - ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူခရီးသွားနေသောဂျပန်ရှုခင်း -"ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ
"ပထမတစ်ဝက်ကတော့တိုကျို၏ရှုခင်း၊ ဒုတိယတစ်ဝက်ကတော့ ဦး တည်ရာရှုခင်းသာဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းပစ္စည်း ၄၀၀ ခန့်ပြသရန်စီစဉ်ထားသည်။
ပထမပိုင်းတစ်ဝက်တွင်တိုကျိုတွင်မွေးဖွားခဲ့သော Hasui တိုကျိုကိုမည်သို့ရေးဆွဲခဲ့ပုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ငါအစောပိုင်းကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသမိုင်းဝင်နေရာများကိုသာမကနေ့စဉ်ရှုခင်းများကိုပါပုံဖော်သည့်အရာများစွာရှိသည်။ယခုပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယခင်ကဖြစ်ခဲ့သည့်အရာ၊ အတိတ်၏ရှုခင်းများနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည်တို့ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်။သို့သော်စစ်ပွဲမတိုင်မီတိုကျိုကိုအားတက်သရောဆွဲဆောင်ခဲ့သူ Hasui သည်စစ်အပြီးတွင်ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။စစ်မတိုင်မီအလုပ် ၉၀ နီးပါးရှိသော်လည်းစစ်လွန်ကာလ ၁၀ ခုသာရှိသည်။စစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတိုကျိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါကိုယ်တိုင်တိုကျိုကိုဆုံးရှုံးရတာအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
စစ်အပြီးတွင် Ota Ward ကိုပုံဖော်သောအလုပ်မှာ“ Washoku Pond ၌နှင်းပွင့်” ဖြစ်သည် (၁၉၅၁ / Showa ၂၆) ။ဒါဟာဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းရေဆေးရေကန်၏ရှုခင်းဖြစ်သည်။သူသည်ရေကန်ကန်ထဲတွင်လမ်းလျှောက်လေ့ရှိပြီးသူနှင့်တွဲစပ်နေဖွယ်ရှိသည်။
Hasui Kawase "Washoku Pond ၌ကျန်ရှိသောနှင်း" ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ငါနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့သောရှုခင်းမှာ Ikegami Snow (Ikegami Snow) (IKegami Honmonji Temple (1956 / Showa 31)) ဖြစ်သည်။သေခြင်းမပြုမီတစ်နှစ်။ဤသည်ကိုလည်းနှင်းဖုံးရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါနောက်ဆုံးဆွဲဆောင်ခဲ့သည့်အရာမှာ Washokuike နှင့် Honmonji ဟုခေါ်သောရှေးဟောင်းဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကမပြောင်းလဲသေးသောရှုခင်းနှင့် တွဲ၍ ဆွဲထားလိုက်သည်။နှစ် ဦး စလုံး Hasui ကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်သောကမ္ဘာဖြစ်ကြသည်။
Hasui Kawase "Snow on Ikegami" ကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ပြပွဲရဲ့နောက်တစ်ဝက်မှာတော့ Hasui ရဲ့ခရီးသွားရာရှုခင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။ အဲဒါကတခြားအရာအားလုံးထက်ခရီးသွားရတာကိုငါကြိုက်ခဲ့တယ်။Corona ကြောင့်ခရီးသွားရတာခက်ခဲတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Hasui ကငါတို့ကိုယ်စားလမ်းလျှောက်ပြီးရှုခင်းအမျိုးမျိုးကိုဆွဲနေတယ်။Hasui မှရေးဆွဲခဲ့သောရှုခင်းများမှတစ်ဆင့်ဂျပန်တစ်လွှားခရီးသွားခြင်း၏ခံစားချက်ကိုသင်ခံစားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။"
Ota ရပ်ကွက်ရိုးရာပြတိုက်မှူး။၂၀၁၀ တွင်သူသည်လက်ရှိရာထူးကိုရယူခဲ့သည်။Magome Bunshimura နှင့်သက်ဆိုင်သောအမြဲတမ်းပြပွဲအပြင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသူသည်စာရေးဆရာ / ပန်းချီဆရာမှရေးဆွဲခဲ့သောအလုပ်ခွင် - ရှုခင်းများမှ Ota Ward ကိုအထူးပြပွဲတွင်တာဝန်ယူခဲ့သည်။
Kawase Hasui ၏ယဉ်ကျေးမှု - Ota Ward ရိုးရာပြတိုက်
1883 (Meiji 16) -1957 (Showa 32), Taisho နှင့် Showa အချိန်ကာလများတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ထုတ်ဝေသူ Shozaburo Watanabe နှင့်ပုံနှိပ်အသစ်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။သူသည်ရှုခင်းပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အထူးပြုခဲ့ပြီးသူ့အသက် ၆၀၀ ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အနုပညာပုဂ္ဂိုလ် + ပျား!
"Matsuda, ခေတ်သစ်အကောက်ခွန်သမိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများစုဆောင်း 集 ( စုရုံး ) မစ္စတာ။ "
လူအတော်များများသည် Matsuda စုဆောင်းမှုပြပွဲ "KAMATA Seishun Burning" နှင့် "Kamata Densetsu, Movies of the City" ကို Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်း Ota Ward Hall Aplico နှင့် Ota Ward စက်မှု Plaza PiO တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။Shochiku Kamata ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ပစ္စည်းများစုဆောင်းသူ Shu Matsuda သည်အိုလံပစ်ကုန်ပစ္စည်းများစုဆောင်းသူလည်းဖြစ်သည်။
ငါ Kanda ရဲ့တစ်ပတ်ရစ်စာအုပ်လမ်းသို့အပတ်တိုင်းသွားခဲ့တာနှစ် ၅၀ ကျော်ပြီ။
မဂ္ဂဇင်းများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ တံဆိပ်များစသည်တို့အထိကျွန်ုပ်၏ဝါသနာစုဆောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာ“ စုရုံးခြင်း” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အမည်မှာ ငါနရာကနေတိုကျိုကိုသွားခဲ့တယ်၊ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စာအုပ်တွေကြိုက်တယ်၊ ငါတက္ကသိုလ်တက်တုန်းကကန်ဒါရဲ့စာအုပ်ဟောင်းလမ်းကိုသွားခဲ့တယ်။ အပတ်တိုင်းအနှစ် ၅၀ ကျော်သွားခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ငါပြန်သွားတာပဲ။ ”
“ ဒါကမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့်နှစ် ၃၀ လောက်မှာငါဒီစာအုပ်ကိုတစ်သက်လုံးဝါသနာဖြစ်အောင်အစအဆုံးစုဆောင်းခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသီးခြားဝယ်ယူခဲ့ပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာစုဆောင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်လောက်မှာငါသွားခဲ့တယ်။ စာအုပ်ဆိုင်ခရိုင်အဟောင်းသာမကဈေးကွက်ဟောင်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်နေရာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ "
"လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ လောက်က ၁၉၈၀ နဲ့ ၁၉၉၀ ကြားက။ ကန်ဒါမှာပုံမှန်တစ်ပတ်ရစ်စာအုပ်စျေးကွက်ရှိခဲ့တယ်။ တိုကျိုတစ်လျှောက်လုံးမှာစာအုပ်ဆိုင်တွေကပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုယူလာပြီးမြို့ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါအဲဒီမှာရတယ်။ ပထမဆုံးစုဆောင်းတဲ့တရားဝင်အိုလံပစ် ၁၉၄၀ ခုနှစ်တိုကျိုအိုလံပစ်အတွက်စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းကိုတိုကျိုတွင်ကျင်းပလိုသောကြောင့် JOC က IOC သို့တင်ပြခဲ့သည်။
Phantom 1940 တိုကျိုအိုလံပစ်တရားဝင်အိုလံပစ်အစီအစဉ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကျမ်း) A KAZNIKI
ဒါဟာတကယ်ကောင်းကောင်းကျန်ရစ်၏။သင်၌ JOC တစ်ခုရှိပါသလား။
"ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ အရင်တုန်းကအမျိုးသားအားကစားရုံမှာအားကစားပြတိုက်ရဲ့ဂျာမန်ပုံစံရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းရှိမယ်မထင်ဘူး။
ထို့နောက် "အရှေ့တိုင်း၏တိုကျိုအားကစားဗဟိုဌာန" ကိုစီမံကိန်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက် IOC သို့တင်ပြခဲ့သည်။အရှေ့တိုင်းအားကစား၏ဗဟိုချက်အနေနှင့်ဤသည်သည်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ၏လေလံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကဂျပန်ကိုနှစ်သက်သည့်လှပသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဂျပန်အားကစားပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ "
၁၉၄၀ တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအယ်လ်ဘမ် "TOKYO SPORTS CENTER ORIENT" ⓒ KAZNIKI
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖြင့်သင်သည်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ပစ္စည်းများစုဆောင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စာအုပ်စျေးကွက်၌တစ်နည်းနည်းဖြင့်အဖိုးတန်သောအရာများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၉၂၆ ပါရီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ ၁၉၃၆၊ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသည် ၁၉၂၈ ခုနှစ်၊ အမ်စတာဒမ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ဂျပန်အားကစားသမားများကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်ပွဲများဖြစ်သည်။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပွဲသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ တိုကျိုအိုလံပစ်အတွက်ပစ္စည်းများလည်းရှိသည်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်သတင်းစာတံဆိပ်ခေါင်းများပြည့်နေပြီဖြစ်သည်။Furoshiki အဖြစ်အသုံးပြုသော torchbearer ၏ပိုစတာလည်းရှိသည်။Furoshiki ကဂျပန်လား။ထို့အပြင်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်၍ Shinkansen စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအထိမ်းအမှတ်လက်မှတ်များ၊ monorail ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်လက်မှတ်များနှင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Metropolitan အမြန်လမ်းဖွင့်ပွဲအတွက်လက်ကမ်းစာစောင်များလည်းရှိသည်။ "
ငါပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တဲ့အခါ "ငါနဲ့တွေ့ဖို့စောင့်နေတယ်" လို့ခံစားရတယ်
"ဒါဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ။ Heiwajima မှာရိုးရာအကောင်အထည်ဖော်တဲ့စျေးကွက်မှာတစ်နှစ်ကိုလေးငါးကြိမ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာပေါက်သွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာမှာပါ။ ငါတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်တူးပြီးစုဆောင်းတယ်။ ဒါကငါနင်းပေမဲ့တကယ်စုဆောင်းထားတာဖြစ်တယ်။ "
"ကောင်းပြီ၊ အဲဒါက ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိမယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာက 100,000 လောက်ရှိတယ်။ ငါက ၁၀၀,၀၀၀ အထိရနေတယ်၊
၁၉၆၄ တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအရာရှိ၏အထိမ်းအမှတ် (လက်ယာဘက်) နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ၃ ခုရောင်းရန်ⓒ KAZNIKI
အကယ်၍ သင်နှစ် ၅၀ ကျော်စုဆောင်းလျှင်၎င်းသည်ပုံမှန်အစာစားခြင်းနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်အလေ့အထဖြစ်လာသည်။
နှင့်အပြီး, ပြီးနောက်, အစည်းအဝေးများ၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်။ငါသည်အခြားစုဆောင်းသူများနှင့်မကြာခဏစကားပြောသော်လည်းအကြောင်းအရာတစ်ခု = ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်ကြုံရသည့်အခါခံစားမှုသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။အရာအားလုံးကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်လူတွေကိုအမြဲတမ်းတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ၊ တချို့သူတွေအတွက်နှစ် ၁၀၀ ကျော်မှာများစွာသောသူတို့သည်မမြင်ရသောအချိန်ကိုကုန်လွန်ခဲ့ကြပြီ။တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်တော့်ရှေ့မှာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ငါပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တဲ့အခါ“ ဒီကောင်ကငါ့ကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေတယ်” လို့ခံစားရတယ် "
ပျောက်ဆုံးနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြည့်ခြင်း၏ရွှင်လန်းခြင်း။ အကယ်၍ သင်ပစ္စည်းများဆက်လက်စုဆောင်းနေပါကသင်သည်ဆွန်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Zuburn's Burn နှင့်အတူပဟေlikeိဆန်ဆန်နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည်။ အနည်းငယ်စွဲလမ်းစေသည်။
အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်။Ryunosuke Akutagawa ၏စာသားကိုသင်ရရှိသောမဂ္ဂဇင်း၌ဖတ်ပြီး Akutagawa သည် Sumako Matsui * ဇာတ်စင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ် Imperial ပြဇာတ်ရုံ၌မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ထို့နောက်ငါဇာတ်စင်၏ရေးသားထားသောပစ္စည်းကိုဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်။ထို့နောက်ဆူမားကော့မစ်ဆူဝီမှပစ္စည်း ၁၀၀ ခန့်သည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုစုဆောင်းခဲ့သည်။ "
"အကြီးမားဆုံးသောရွှင်လန်းမှုကစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာမှာပြန်လည်အတွေ့အကြုံပါ။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၂၂ (Taisho 1922) ရုရှားဘဲလေးသမားအန်နာပါဘလူး * ၏imperကရာဇ်ဒရာမာဖျော်ဖြေရေးအတွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူမစင်ပေါ်ကိုငါတကယ်မတွေ့ရဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းကအစီအစဉ်နဲ့ bromide ကိုငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ့်စင်မြင့်ကိုမြင်ရခြင်းရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားမှုပါပဲ။ သင်ကလူများစွာရဲ့ဘ ၀ ကိုခံစားနေသလိုခံစားရတယ် မင်းဟာအနှစ် ၁၀၀ ကျော်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသလိုပေါ့။"
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တိုကျိုအိုလံပစ် 2020 + 1 အတွက်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များကိုပြောပြပါ။
ပွဲတော်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများကဲ့သို့သောပစ္စည်းမျိုးစုံရှိသည်။ လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများအပြီးတွင်တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုရှင်သန်ရန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသင်းမှလေးနှစ်တာထုတ်ဝေသောစာအုပ်ငယ်လည်းရှိသည်။ လက်ကမ်းစာစောင်လည်းရှိသည်။ ဂျပန်တစ်ဝှမ်းဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများနှင့်ကုမ္ပဏီများကသီးခြားလွတ်လပ်စွာထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ကြီးမားသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်တစ်ဝှမ်းရှိလူများနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းကိုတကယ်အသည်းအသန်အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သောလူတွေကဒီအိုလံပစ်ကိုရပ်သင့်တယ်လို့ပြောကြပေမဲ့အိုလံပစ်သမိုင်းအကြောင်းလေ့လာလေလေ၊ များများပြောလေလေပါပဲ။ ၎င်းသည်အားကစားပွဲတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ အိုလံပစ်အားကစားပုံစံသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူလူသားတို့၏ဉာဏ်ပညာကိုအတူတကွ စုစည်း၍ မရပ်တန့်ဘဲ ဆက်၍ နေရမည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအခမ်းအနားကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေလိုပါ။
Sumako Matsui (၁၈၈၆-၁၉၁၉) - ဂျပန်ဒရာမာမင်းသမီးနှင့်အဆိုတော်သစ်။သူသည်ကွာရှင်းမှုနှစ်ခုနှင့်စာရေးဆရာ Hogetsu Shimamura နှင့်အရှုပ်တော်ပုံမှခံစားနေရသည်။Tolstoy ရဲ့ Hogetsu ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အခြေခံထားတဲ့“ Resurrection” ပြဇာတ်ထဲက "Katyusha's Song" သီချင်းဟာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်။Hogetsu ကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့သည်။
* Anna Pavlova: (၁၈၈၁-၁၁၃၁) - ၂၀ ရာစုအစတွင်ကိုယ်စားပြုသောရုရှားဘဲလေးကသမား။ M. Fokin မှရိုက်ကူးသော "Swan" အပိုင်းအစကိုနောက်ပိုင်းတွင် "Dying Swan" အဖြစ်လူသိများလာပြီး Pavlova နှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်လာသည်။
ခေတ်သစ်အကောက်ခွန်သမိုင်း၏တစ် ဦး ကစုဆောင်း။ကလေးဘဝကတည်းကစစ်မှန်သောစုဆောင်းသူ။၎င်းသည်ခေတ်သစ်ဂျပန်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ပြဇာတ်များနှင့်အိုလံပစ်များကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။
အနာဂတ်အာရုံစူးစိုက်မှု EVENT + ပျား!
အနာဂတ်အာရုံစူးစိုက်မှု EVENT ပြက္ခဒိန်မတ်လ - Aprilပြီလ 2021
အာရုံစူးစိုက်မှု Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်အနာဂတ်၌အချက်အလက်များကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
Ota Ward ရှိပင်လယ်ကမ်းခြေအသွင်အပြင်များကိုဆွဲပါ။
ပေး: Omori Nori ပြတိုက်
ယခုကျင်းပ - ဇူလိုင်လ7တနင်္ဂနွေ
Omori Nori ပြတိုက်
(၂-၂ ဟီ ၀ အိုနိုမိုရီကို၊ အိုတာကူ၊ တိုကျို)
စီစဉ်သူ / စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
အထူးပြပွဲ "Hasui Kawase - ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူခရီးသွားနေသောဂျပန်ရှုခင်း -"
[ပထမအသုံးအနှုန်း] "တိုကျို၏ရှုခင်း" ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် (Sat) - 7ဂုတ် ၁၅ ရက် (နေ)
[နှောင်းပိုင်း] သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) "ဦး တည်ရာရှုခင်းရှုခင်း" - စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် (တနင်္လာနေ့ / အားလပ်ရက်)
ပုံမှန်အားလပ်ရက် - တနင်္လာနေ့ (သို့သော်ပြတိုက်ကိုသြဂုတ်လ ၉ ရက် (တနင်္လာနေ့ / အားလပ်ရက်) နှင့်စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် (တနင်္လာနေ့ / အားလပ်ရက်) ဖွင့်သည်။
အဆောက်အ ဦး တစ်ခုစီ၏ပြပွဲစတင်ရက်မှသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အင်္ဂါနေ့အထိ (Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ၌သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တနင်္ဂနွေအထိ)
အထူးပြပွဲများနှင့်အထူးပြပွဲများကိုအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် Ryuko Memorial Hall, Katsu Kaishu Memorial Hall နှင့် Omori Nori ပြတိုက်တို့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဤအခွင့်အလမ်းကို ကျေးဇူးပြု၍ Ota Ward ရှိပြတိုက်များသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အထူးပြပွဲ "Katsushika Hokusai" Tomitake ၏ ၃၆ ခုမြင်ကွင်း "Ryuko Kawabata's Venue Art"
ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် (Sat) - သြဂုတ် ၁၅ ရက် (နေ)
9: 00-16: 30 (16:00 ဝန်ခံချက်သည်အထိ)
ပုံမှန်အားလပ်ရက် - တနင်္လာနေ့ (သို့မဟုတ်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါကနောက်နေ့)
Ota ရပ်ကွက် Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမ
(၄-၂-၁၊ အလယ်ပိုင်း၊ အော့တူး၊ တိုကျို)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၀ ယန်း၊ ကလေး ၅၀ ယန်း
အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် (၆ နှစ်အောက်) အခမဲ့ဖြစ်သည်
Ota ရပ်ကွက် OPEL Atelier 2021
သြဂုတ်လ ၇ ရက် (Sat) နှင့် ၈ ရက် (Sun)
Satoru Aoyama၊ Mina Arakaki, Taira Ichikawa, Yuna Ogino, Moeko Kageyama, Reiko Kamiyama, Kento Oganazawa, TEPPEI YAMADA, Takashi Nakajima, Manami Hayasaki, Riki Matsumoto နှင့်အခြားသူများ
အနုပညာစက်ရုံ Jonanjima, ပြခန်း Minami Seisakusho, KOCA, WEMON စီမံကိန်းများမှ SANDO နှင့်အခြားသူများ
Ota Ward OP2021 Atelier XNUMX အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြပွဲ "Ryuko Kawabata vs Ryutaro Takahashi Collection"
-Makoto Aida၊ Tomoko Konoike၊ Hisashi Tenmyouya၊ Akira Yamaguchi "
ဓာတ်ပုံ - အယ်လီနာ Tyutina
လူထုဆက်ဆံရေးနှင့်လူထုကြားနာခြင်းဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာမြှင့်တင်ရေးဌာန၊ Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
Tel: 03-3750-1611 / ဖက်စ်: 03-3750-1150
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.6 + bee!
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.5 + bee!
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.4 + bee!
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.3 + bee!
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.2 + bee!
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.1 + bee!